Gabadh Murashaxnimo Madaxweyne Ku Wayday "Sumcad Darrada Aabaheed"
Wednesday 15th May 2019 11:11:50 in Wararkii Maanta by Madaxa Wararka
Maxkamadda dastuurka ee Guatemala ayaa tartanka madaxweynenimada ka hor istaagtay gabadh uu dhalay hoggaamiyihii hore ee milatariga ahaa Efraín Ríos Montt.
Zury ayaa ka mid ahayd murashaxiinta ugu cadcad ee u ol’olaysanaya doorashada 16 Juunyo.
Maxkamadda ayaa sheegtay in dastuurka Guatemala uu madaxweynenimada ka hor istaagayo qaraabada hoggaamiyeyaasha xukunka maroorsada.
Xiligii uu hoggaanka hayay Efraín Ríos Montt 1980-yadii ayaa loo arkaa mid ka mid ah wakhtiyadii ugu qalafsanaa ee soo mara dagaalkii sokeeye ee Guatemala, wakhtigaas oo cagta la mariyay tuulooyin dhan oo ay daganaayeen qawmiyadda Mayan.
Jeneraal Rios Montt ayaa awoodda maroorsaday 1982 markaas oo uu dhacay afgambigii d'état, wakhtigaas-na waxaa socday dagaal u dhaxeeyay dawladdii milatariga ahayd iyo jabhado.
Waxaa lagu eedeeyay in uu amray in la laayo1,700 ruux oo ka soo jeeda qowmiyadda Mayans, kuwaas oo xukuumaddiisu ay u aragtay in ay gabaad siinayeen jabhadaha.
Jeneraalkii waxaa xukunka ka tuuray wasiirkiisii difaaca bishii Agoosto ee sannadkii 1983, 30 sano ka dibna wuxuu noqday qofkii u horreeyay ee isaga oo madaxweynenima soo mara dacwado xasuuq lagaga soo oogo dalkiisa.
Waxaa lagu helay dambi, balse markii dambe xukunkaas waa meesha ka saartay maxkamadda sare ee Guatemala.
Wuxuu geeriyooday 1 bishii Abriil ee sannadkii 2018kii isaga oo 91 jir ah, lix bilood uun ka dib markii dib loo soo celiyay dacwaddaas.
Hubaanti la’aanta oo sii socota
Gabadhiisa Zury Ríos ayaa ahayd murashaxad ay siyaasaddeedu garabka midig u janjeerto oo ka tirsan xisbiga Valor.
Qaraabada dadkii boqolaalka kun ee ruux ahaa ee la laayay oo u badnaa dadkii asalka u daganaa dalkaas ayaa soo dhaweeyay go’aanka ay maxkamaddu ku hor istaagtay Zury.
Zury ayaa mar hore sheegtay in tartanka oo laga hor istaago aysan meel uga dhacayn xaquuqdeedii oo kali ah balse ay sidoo kale meel ka dhac ku tahay taageerayaashii rabay in ay u codeeyaan.
Ra’yi aruurin la sameeyay ayaa muujisay in gabadhan ay ka mid tahay saddexda murashax ee ugu cadcad, labada ruux ee ay aadka isu hayeen ayaa kala ah Sandra Torres oo horay u soo noqotay marwada koobaad iyo Thelma Aldana oo horay u soo noqotay xeer ilaaliyaha guud.
Sandra iyo Thelma ayay iyaguna u badan tahay in tartanka laga hor istaago.
Sandra ayaa loo haysaa dacwado la xiriira wax isdabo marin, in ay been sheegtay iyo canshuur lunsasho, arrimahaas ayayna ku tilmaantay kuwo siyaasadaysan. Thelma ayaa iyadana lagu eedeeyay in ay si sharci darro ah lacago ugu ol’olaysatay, balse eedayntaas way diiday.
Maxkamadda dastuurka ayaa labadaas dacwadood go’aan ka gaari doonta maalmaha soo socda.
Mario Estrada oo isna murashax ahaa ayaa bishii hore lagu xiray dalka Maraykanka isaga oo looga shakiyay in uu maleegayay in uu maandooriyaha cocaine geeyo dalka Maraykanka.